बाहुवली अभिनेता प्रभासले करिनाको घरमा किन बिरयानी पठाए ? यस्तो छ चकित हुने रहस्य - Khabar Nepali
होमपेज / Uncategorized / बाहुवली अभिनेता प्रभासले करिनाको घरमा किन बिरयानी पठाए ? यस्तो छ चकित हुने रहस्य
सैफ अली खान र बाहुबली अभिनेता प्रभास चाँडै ‘आदिपुरुष’ मा देखिने छन्। उनीहरुको मित्रताको खबर आजकल चर्चामा छ। एकै साथ, प्रभास सैफ र करीना कपूर को लागी घर मा बनेको बिरयानी पठाएका छन् । करीनालाई यो बिरयानी मन पर्यो। करीना, जो सोशल मिडिया मा सक्रिय छिन्, उनले आफ्नो डिनर को एक तस्वीर इन्स्टाग्राम स्टोरीज मा साझा गरीन् । बिरयानी र विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरु यस तस्वीर मा देखीन्छन् । यो तस्बिर शेयर गर्दै करीनाले भनिन् कि यो बिरयानी ‘बाहुबली’ स्टार प्रभासले उनको लागी पठाएका थिए।
तस्बिर सेयर गर्दै करीनाले क्याप्सनमा लेखीन् ‘चलो खाना खाउँ। जब बाहुबली तपाइँ बिरयानी पठाउनुहुन्छ, यो सबै भन्दा राम्रो हुनेछ। प्रभासलाई धन्यवाद दिँदै उनले लेखेकी छन् ‘प्रभासलाई यो अद्भुत खानाको लागी धन्यवाद।’ ‘आदिपुरुष’
‘आदिपुरुष’ मा प्रभास भगवान राम बाट प्रेरित एक चरित्र मा देखिनेछन्। जबकि कृति सेनन सीताको भूमिकामा हुनेछिन्। फिल्ममा अभिनेता सनी सिंहले लक्ष्मणको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र सैफ अली खान रावणबाट प्रेरित भूमिका खेल्नेछन्। फिल्मलाई ‘तानाजी द अनसंग वारियर’ का निर्देशक ओम राउतले निर्देशन गर्दैछन्।